Somaliland: Waran-cadde oo u jawaabay Gaafoow
​Somaliland: Waran-cadde oo u jawaabay Gaafoow
HARGAYSA- Xukuumadda Somaliland, ayaa jawaab ka bixisay eedo la xiriira codsi xarun laga bixiyo baasaboorka Soomaaliga oo laga furo Somaliland oo uu madaxa laanta Socdaalka Soomaaliya Gen. Cabdilaahi Gaafow u jeediyey Wasiirka arrimaha gudaha Mudane Cali Waran-cadde.
Wasiir Waran-cadde oo arrintaasi ka jawaabayay xilli uu la hadlay saxaafadda Hargaysa ayaa sheegay inaysan jirin wax codsi ah oo ku dalbaday xarun baasaboor, isagoo qoraalka lasoo bandhigay ku sifeeyay mid ay dhoob dhoobeen dad fidinaya dacaayado.
“Runtii waa mucjisooyinka aynu Somalia ka maqlayno, Gaafowna saraakishii aan xukumi jirey ayuu kamid ahaa, laakiin Madaxweyne Xasan Sheikh, ayaa arrinta dabada ka wada, waana been raqiis ah oo la abuuray, waxaanu leenahay Baasaboor aanku socdaalno oo meel walba ku tagno,”Ayuu yidhi Cali Waran-cadde.
Deedafaynta wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, ayaa soo baxday kadib markii uu madaxa laanta Socdaalka Soomaaliya Md Gaafow si gaar ah ugu jeediyey Waran-cadde, isagoo warqad uu saxaafadda u akhriyey ku sheegay in wasiirku dalbanayaan xarun baasaboorrada soomaaliga ah laga bixiyo oo Hargeysa laga furo.
​Gaafow oo joojinaya duulimaadyada Hargaysa
Soomaliya 02.02.2016. 12:02
MUQDISHU-Taliyaha laanta socdaalka Somalia Cabdullaahi Maxamud Gaafow ayaa ka hadlay qoraal kasoo baxay xafiiskiisa kaasoo qaab KMG ah loogu joojinayo dulimaadyada diyaaradaha isaga kala goosha magaalooyinka Hargaysa iyo Muqdishu.
Gaafow oo waraysi siiyay la ...
Farmaajo oo Somaliland ugu baaqey in dib ula midoobaan Somalia [Daawo]
Soomaliya 26.06.2017. 13:19
Jubbaland gacanta ku dhigtay ajaaniib u dhashay Iran iyo Pakistan
Soomaliya 20.06.2017. 12:05
​Somalia: Taliye loo magacaabay laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha
Soomaliya 27.07.2016. 16:09
Gaafoow oo loo magacaabay Taliyaha NISA
Soomaliya 16.07.2016. 20:52
Somaliland oo markale ajaanibka ka hadashay
Somaliland 13.03.2016. 22:45
Somaliland: 14 qof oo ku dhimatay shil gaari
Somaliland 26.02.2016. 20:09
Madaxweyne Siilaanyo oo ku wajahan Laascaano
Somaliland 31.01.2016. 23:42